Ukulunga kunye nokubi kwendlela emnyama: nantsi iiapos; xa uyisebenzisa kwaye kutheni
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ukulunga kunye neengozi zeNdlela eMnyama: Nazi iiapos zokuyisebenzisa kwaye kutheni
Ukulunga kunye neengozi zeNdlela eMnyama: Nazi iiapos zokuyisebenzisa kwaye kutheni
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, enye yezona zinto zixhaphakileyo zesoftware abasebenzisi abaye bayikhwaza yeyona nto ihloniphekileyo & apos; imowudi emnyama ', okanye' imowudi yasebusuku ', ukuba uyathanda. I-iOS kunye ne-Android bobabini bafumene iindlela ezimnyama zenkqubo ngo-2019, nangona uninzi lweefowuni lweefowuni zithathe iimfuno zabasebenzisi kufutshane nentliziyo kwaye zibandakanya imo emnyama kwindawo yabo yesiko ye-Android ngaphambili. Kukwasebenza ngokufanayo kuninzi lwezona zixhobo zefowuni ezaziwa kakhulu ezifumaneka kwiVenkile yeApple yeApple nakwiVenkile yeGoogle Play, kwaye ngaphandle kwezinto ezimbalwa ezibonakalayo (ukujonga kuwe kwi-Instagram) unganakho konke ukubonakala kobumnyama. Kubonakala ngathi okwangoku ubuncinci, imowudi emnyama yefashoni ilapha ukuze ihlale.
Kwaye imo emnyama iyadunyiswa kwindalo iphela njengoko oku kuguqulwa kwifowuni yakho kunye nokuseta ujongano lweapos eziza kunciphisa ngomlingo uxinzelelo lwamehlo, ukudinwa kwamehlo, kukuncede ulale ngcono ebusuku, ukusombulula indlala yehlabathi, kunye nantoni. Ngaba ikhona inyani koku okanye ngaba yenye ifad enokuthi ngenze ingozi engaphezulu kunokulunga?
Yintoni imowudi emnyama?
Imowudi emnyama ukusuka kumbono wokusebenziseka
Kutheni imowudi emnyama ijongeka ingeyiyo eyendalo
Inqaku lokuphikisa: Imowudi emnyama kunye nesiphumo se-apos; kwi-myopia
Imo emnyama malunga nembono yoyilo
Nangona ii-hues ezithile kunye nemibala ziyahluka, imowudi emnyama siskimu sombala waso nasiphi na isikhombisi esibonisa isicatshulwa esiqaqambileyo kunye nezinto zonxibelelwano ezikwi-background emnyama. Ngokwahlukileyo (akukho pun ejoliswe kuyo), imowudi yokukhanya sisikimu sombala esixhaphakileyo ngakumbi sokubonisa isicatshulwa esimnyama ngaphezulu kwemvelaphi eqaqambileyo.
Ngokumangalisayo, imowudi emnyama yangaphambi kwemowudi yokukhanya kungamashumi ambalwa eminyaka. Kwinqanaba lokusekwa kwayo, imowudi emnyama yayingeyo sisisombululo ekujongwe kuso, kodwa yayiyimveliso ephuma kwitekhnoloji kwiziqalo zokuqala zekhompyuter yakho. Emuva kwiintsuku zokuqala zekhompyuter, ii-monchrome CRT monitors nge-phosphorus zazisetyenziswa, kwaye phantsi kweemeko eziqhelekileyo, i-phosphorus ngaphakathi yabonakala imnyama. I-phosphorus ikhanya kuphela xa umqadi we-elektroni uyibetha. Ukuba yi-monochrome, iisuphavayiza zokuqala zekhompyuter zazinokubonisa umbala omnye kuphela, owawuchazwa luhlobo lwe-phosphorus esetyenzisiweyo-ezona zixhaphakileyo yayingabahloli abahlaza ngombulelo kwi-P1 eluhlaza phosphorus, kodwa unokufumana izandla kwi-P3 amber-phosphorus Iscreen, esasinqwenelekayo enkosi kukuncipha kwamehlo kunye nokuphazamiseka komsebenzisi kunye nesingqisho se-circadian, kunye ne-P4 emhlophe-phosphorus yokujonga ukuba unethamsanqa.
Imowudi emnyama ye-nostalgia- i-IBM 5151 ye-monochrome esweni ngeli xesha, isoftware ikwakhuthaze ukwamkelwa okubanzi kwemowudi emnyama. Xa ucinga ngeekhompyuter ezindala, wena & apos; sinokucinga ngokufana okumhlophe / okubhaliweyo okuluhlaza okukhawulezileyo kwikona ephezulu ngasekhohlo yomfanekiso omnyama ubukhulu becala, owawusisiqalo 'sasekhaya' seekhompyuter ezininzi kwii-60s, 70s, and 80s early . Ezi ndawo zonxibelelwano zokuqala azizange zenze lukhulu kubo kwaye, ngokungagqibekanga, ubukhulu becala babumnyama ngenkangeleko.
Ixesha elichanekileyo xa 'imowudi yokukhanya' ibone ukukhanya kwemini kunzima ukuyicofa, kodwa inokuthi ilandelwe kwi-Xerox PARC graphical interface (eyaphefumlela kakhulu iiApple kunye neapos; s iMacintosh kunye nezinye iinkqubo ezininzi zokusebenza ngelo xesha ), Esebenzisa isicatshulwa esimnyama kunye nezinto zonxibelelwano kwindawo ephezulu kakhulu emhlophe. Inxibelelene ngokusondeleyo nenkqubela phambili kwitekhnoloji yokubonisa kunye nokufika kojongano lomsebenzisi wangoku. Ezona zibekiweyo ze-RGB CRT, ezazinakho ukubonisa umbala, zaba zizinto eziphambili zenguqu 'yemodi yokukhanya'.
IXerox Alto ngo-1973 yayiphakathi kweekhompyuter zokuqala ukusebenzisa imowudi yokukhanya, ephefumlela uLisa, iMacintosh, nezinye iinkqubo zokusebenza
Njengabahloli ngoku babekwazi ukubonisa ujongano oluntsonkothileyo, kwaye okona kubaluleke kakhulu, banikezela ngemibala emhlophe, abaqulunqi beekhompyuter kunye nabadwelisi benkqubo basebenzise itekhnoloji ukulingisa imbonakalo yakudala yamaphepha abhaliweyo abonwa ukuba asebenziseka lula kwiiJoe eziqhelekileyo ezazikhona ukubamba umhlaba omangalisayo wekhompyuter ephathekayo okokuqala. Ukuze uphumelele, iteknoloji kufuneka ibe nobuhlobo kwaye ingoyiki. Ukunyuka kwe-skeuomorphism kwii-GUI, ezikulinganisa ngokusondeleyo ukubonakala kwezinto zehlabathi lokwenyani kwisoftware, ikwasebenzise kakuhle imowudi yokukhanya njengoko ivumela ukubonakaliswa kwendalo kwezinto zomdibaniso kunye nokubonakaliswa kwendalo ngakumbi kwezithunzi.
Into ebangela umdla kukuba, kanye njengoko ukuphuculwa kwetekhnoloji ye-teknoloji kungenise kwinqanaba eliphambili le 'imowudi yokukhanya', kukwakuphuhliso olufanayo lwetekhnoloji yokubonisa ephinde yavuselela umdla woluntu kunye ne-apos; kumgangatho wobumnyama-enkosi, OLED!
Imowudi emnyama isitayile kunye nehip, akukho luvo lwesibini malunga naloo nto. Nangona isenokungafundeki njengemowudi elula, iindlela ezimdaka zombane zinomtsalane onokuthi unxulunyaniswe nesibindi, ubume, ubucukubhede, imfihlakalo, amandla, ubunewunewu, njl. Ngokulula, zonke ezi mpawu zinomtsalane kwaye ziyanqweneleka, ngakumbi xa kufikwa kwintengiso. Nangona kunjalo, umbala omnyama ngumbala owomeleleyo ovusa iimvakalelo ezinamandla ebantwini kwaye unokoyisa ngokulula umntu xa igqithile.
Imowudi emnyama iluncedo ngakumbi xa ufuna ukuqaqambisa uhlobo oluthile lomxholo. I-Spotify, iNetflix, kunye ne-Steam (okanye i-Holy Trifecta ye-Procrastination, njengoko ndithanda ukubabiza) zezonaapps kunye neenkonzo ezithandwa kakhulu eziyile ngohlobo olumnyama engqondweni. Ngoba? Kungenxa yokuba bafuna ukuba uzobe ujongile kubugcisa bealbham enemibala kunye nenamandla, ividiyo kunye nezithombisi zemidlalo. Imowudi emnyama yenza eyokugqibela iphume ngendlela ethile yokuba imowudi yokukhanya ayinakho & apos; t.
I-Trifecta eNgcwele yokuzibekel 'amangomso ikwimeko emnyama ngokungagqibekanga Nangona kunjalo, iiapos ziyinto enobuqhophololo ukukhupha ujongano olungileyo lwendlela emnyama. Inye ukuba ezona ngxaki zayo zinkulu kukufiphala. Kunye, imowudi emnyama iyasinyanzela ukuba sivule ngakumbi abafundi bethu ukuze babambe ulwazi olubonakalayo oluyimfuneko, olukhokelela ekunciphiseni ubukhali ngokubanzi. Okwangoku, imo yokukhanya ekhanyayo inyanzela abafundi bethu ukuba bavale kwaye bahlengahlengise ukukhanya okuqaqambileyo, okuphucula ubukhali. Ewe, loo nto yeyokusebenza kweekhamera apho kuvulwa khona indawo evulekileyo ebamba ukukhanya ngakumbi kodwa ii-apos azibukhali njengokuvula okuncinanana. Kungenxa yoko le nto isicatshulwa esimnyama kwimvelaphi emhlophe sinokubonakala sibukhali emehlweni akho.
Abafundi abaqaqanjisiweyo bavumela ukukhanya ngakumbi, kodwa ukuqonda ubukhali kuyasokola
Enye into ekufuneka uyiqwalasele sisiphumo esibizwa ngokuba 'ukumisa', eyi-bane yabasebenzisi abanokungaboni kakuhle kunye neendlela zendlela emnyama. Nangona i-halation yingxaki enkulu kwimibala ye-gradients, ineziphumo ezininzi kwizicatshulwa eziphezulu ezichaseneyo. I-Halations yenza isicatshulwa esimhlophe sibonakale ngathi sihlambile kwaye sopha kwimvelaphi emnyama kwaye sibonakale sisiphazamiso kunokuba sinjalo. Oku kuyinyani ngakumbi kubantu abane-astigmatism kunye / okanye i-myopia (kufutshane nokubona), abanobunzima kakhulu ekumisweni.
Jonga umfanekiso obonisa apha ngezantsi. Nokuba unombono ogqibeleleyo wama-20/20, kunokwenzeka ukuba ubone ii-halos ezijikeleze abalinganiswa abamhlophe ababoniswe kwimvelaphi emnyama. Ngeli xesha, akunakulindeleka ukuba ubone nakuphi na ukuhlanjwa nokukopha okukhoyo kwicala lasekhohlo lomfanekiso, elibonisa abalinganiswa abamnyama abakwimvelaphi emhlophe.
IHalos ibonakalisile-imowudi yokukhanya vs imowudi emnyama
Esi siphumo sinokuba namandla xa kujongwa ifonti enobunzima obuphantsi:
Imifanekiso esekunene kufuneka ibe nee-halos ezininzi kunye nabalinganiswa ababonakala bephuma igazi komnye nomnye nakwimvelaphi ngokunjalo. Esi siphumo 'sokumiswa' kufuneka sibonakale ngokucacileyo ukuba ngaba ukhathazwa sisifo se-astigmatism. Kubantu abanjalo, iindlela zonxibelelwano ezimnyama zisenokungabonakali zilungile kwaye zinokukhokelela kuxinzelelo lwamehlo ngakumbi njengoko wena & apos; sisokola ukwenza abalinganiswa. IHalation yindlela, indlela engaqhelekanga kangako kwimowudi yokukhanya, kungenxa yoko kucetyiswa kubantu abaphethwe ziziphumo ezibi ze-astigmatism.
Imowudi emnyama ijongeka ingeyiyo eyendalo
Izifundo ezininzi zesayensi kunye nophando kule minyaka sele zigqibile ukuba ingqondo yomntu yonke inzima kwaye inomdla wokukhetha imifanekiso emnyama eboniswe kwimvelaphi eqaqambileyo. Kuphikisiwe ukuba isizathu soku silele kwindalo yethu njengezinto eziphilayo: iintlobo zethu,homo sapiens, ibijikeleze iminyaka engama-200,000-300,000 ubuncinci, kwaye kangange-99% yelo xesha, ookhokho bethu bebesebenza kakhulu imini yonke (iintlobo zezinto eziguqukayo). Kuyamkelwa ukuba abantu bakudala babehlala kwi-savanna yase-Afrika, kwaye yintoni eyona nto iyinyani malunga ne-savanna yaseAfrika ngexesha lasemini? Oko & apos; ilungile-imvelaphi eqaqambileyo engaboniyo kunye nezinto ngokubanzi ezimnyama ezenza izithunzi ezinzima. Ke, i-homo sapiens yobuchopho bokuqala kwafuneka iguquke ngendlela enokuthi ikhawuleze nangokufanelekileyo ukwahlula ukutya, izixhobo eziluncedo, amarhamncwa ayingozi, kunye nezinye izinto ezinomdla ezivela ngasemva ngoncedo lokubonwa okungafaniyo.
Ngaba ufuna obunye ubungqina? Masithi ii-apos zitsho ukuba ezokuqala ezaziwayo zobugcisa babantu -mizobo yodonga eyandulelayo eyafunyanwa ngaphakathi kwimiqolomba emininzi kwihlabathi liphela-yimizobo egqibeleleyo yokuba kutheni sithambekele ekuthandeni imowudi yemidiya emnyama. Ukupeyinta 'kwangaphambili komqolomba wokupeyinta' kuya kukubonisa ngokukhawuleza ukuba uninzi lwezinyanya zethu zithanda izinto ezimnyama ezitsalwe ngaphezulu kwemvelaphi yokukhanya ngenxa yokuba ii-apos babone ilizwe elibangqongileyo. Nokuba yinyathi, iimammoth, amahashe, iingonyama, imikhombe, kunye nabanye abantu, uya kubona izifundo ezimnyama ezitsalwe ngamalahle ngokuchasene nemvelaphi eqaqambileyo. Ezona zazime ngokukhethekileyo kum yayiyimizobo eyayikwiCavevet Cave eFrance, eyabhalwa malunga nama-30,000 ukuya kuma-28,000 BC, ezintsonkothileyo kwinkangeleko yazo enokuthi mhlawumbi iqokelele uthando kumboniso wobugcisa wale mihla. Enkosi, uPicasso wokuqala!
Iingonyama ezileqa ixhoba, iCavevet Cave, eFrance, malunga ne-30,000-28,000 BC
Amehlo ethu ngewayengancedi nganto ukuba bengangakwazi ukubona umahluko okhoyo phakathi kwezinto ezahlukeneyo, kuba abuthathaka ngakumbi umahluko okrelekrele kunokuba kunjalo ekukhanyeni, ukuya kuthi ga kwindawo apho izinto ezimbini ezinomahluko ongacacanga zinokubonwa njenge idityanisiwe enye kwenye. Umahluko ubaluleke kangangokuba ngaphandle kwawo besingayi kukwazi ukubona umhlaba ukwiimilinganiselo ezintathu.
Kodwa linda, ukuba umahluko ubaluleke ngokwenene, kutheni le nto ayisiyiyo nyaniso ukuba omabini amagama aqaqambileyo kwimvelaphi emnyama, kunye nokuchaseneyo, umbhalo omnyama kwimvelaphi eqaqambileyo, aneempawu ezifanayo ezomeleleyo? Kuyinyani, kodwa izifundo zesayensi ziye zagqiba kwelokuba ubuchopho bomntu busebenza bhetele xa butyhilwa kwipolitiki elungileyo kwaye hayi engalunganga.
Kwicandelo lezenzululwazi, isicatshulwa esiqaqambileyo ngasemva okumnyama, esikubiza ngokuba yi & apos; indlela emnyama 'kule mihla, ibizwa ngokuba'ukungahambi kakuhle'. Kwelinye icala, isicatshulwa esimnyama ngasemva okuqaqambileyo, esiwabiza ngokuba 'yimowudi yokukhanya', yaziwa njenge 'polarity entle'. Isifundo esenziwe ngu-A. Buchner kunye no-Ba. Baumgartner phaya ngo-2007 bathi ingqondo yomntu imiselwe ukuba ithande into elungileyo xa kuthethwa ngokujolisa, ukugxila, kunye nokuhlola 'ukusebenza', okunempembelelo enkulu kubomi bethu bedijithali. kule mihla. Emva kwayo yonke loo nto, uninzi lwezinto esizenzayo kwizixhobo zethu zihambelana nokufunda nokubhala isicatshulwa. I-Buchner kunye neBaumgartner zifumanisa ukuba oku kuyinyani ngaphandle kwesibane esijikelezileyo, ke akukhathaleki nokuba yimini okanye ubusuku okanye ubusuku, iindlela zendlela ezikhanyayo ziya kukuvumela ukuba ugxile ngokukhawuleza kwisicatshulwa kwaye ubonise izinto, ngelixa iindlela ezimnyama zokuhlangana ziya kuyenza nzima ngakumbi Ukwahlula isicatshulwa kunye nezinto ezibonakalayo ezibonakalayo, oko kuthintela ukusebenza kwakho kokufunda kwaye ekugqibeleni uxinzelele amehlo akho.
Kukho nesizathu esivakalayo esifanelekileyo sombhalo omhlophe ngokuchasene nemvelaphi emnyama ujongeka ngokungaqhelekanga kuthi ngenxa yokuba sahluke kakhulu kwisicatshulwa esishicilelwe ephepheni.
Umahluko ekufundeni ubonakalisiwe
Kuluhlu lwezilingo, ukuvavanywa kokuvavanywa kokusebenza ngokungaguquguqukiyo kwakubonakala kakuhle (isicatshulwa esimnyama kwimvelaphi yokukhanya) kunokubonisa okungalunganga kokubonisa (isicatshulwa esikhanyayo kwimvelaphi emnyama). Esi sibonelelo se-polarity esizimeleyo sasizimele kukukhanya okukufutshane (ubumnyama ngokuchasene nokukhanya kweeyure eziqhelekileyo) kunye ne-chromaticity (emnyama nomhlophe vs. eluhlaza okwesibhakabhaka nephuzi). Uvavanyo lokugqibela lubonise ukuba umahluko wombala (umbhalo obomvu kwimvelaphi eluhlaza) awunakukuhlawulela ukungabikho kokukhanya kokukhanya. '
Enye ukufunda ifumanisa ukuba ukubonakaliswa okuhle kokubonisa kuluncedo ngakumbi xa kufikwa kumba wokufunda isicatshulwa esincinci kwimiboniso. Uphononongo lufumanise ukuba oku kusebenza kuzo zonke iintlobo zezixhobo ezisebenzisa ukubonisa ukubonisa ulwazi, kodwa ubukhulu becala kwiifowuni zala maxesha njengoko ngokwazo ezisesona sixhobo siphambili sokusetyenziswa kokubhaliweyo kunye nokusetyenziswa kwemithombo yeendaba. Kwaye ezi ayizizo zonke izifundo ezithe zajongana nomba wokuchasana nokungahambelani kakuhle. Ukucoca (1963). URadl (1980), uBauer noCavonius (1980), uCushman (1986), uGould et al (1986), kunye nabanye bonke bafumanise ukuba ingqondo yomntu iyakonwabela ukufundeka ngokukhawuleza kwaye ikhetha okubhaliweyo okumnyama kunye nezinto eziboniswe kwimvelaphi yokukhanya.
UHanna noHolo kwiYunivesithi yaseMissouri
Inqaku lokuphikisa: Kutheni indlela emnyama ilungile emehlweni akho
Ingxelo yenzululwazi ebizwa 'ngokuFunda kunye neMyopia: Umahluko weMicimbi yoPolitiko', u-Andrea C. Aleman, uMin Wang, noFrank Schaeffel ( funda apha ) eyapapashwa kwi-Nature.com iphonononga iziphumo zokungafani neliso lomntu, kwaye ifike kwisigqibo sokuba ukungahambi kakuhle (imowudi emnyama) ayinabungozi kumbono wakho ekuhambeni kwexesha kunendlela yokukhanya. Ingxelo ifumanisa ukuba ukuthanda imowudi emnyama kuthintela ukukhula kwe-myopia emehlweni akho, eli ligama lonyango lokungaboni ngaphambili, ngelixa imowudi yokukhanya ikhawulezisa ukukhula kwe-myopia.
Myopia Okwangoku sisifo sokungaboni nto siphambili e-US, ngaphezulu kwama-40% abantu abadala abaphethwe kukungaboni ngaphambili kwaye kufuneka babhenele kwiiglasi zokumisela kunye / okanye kwiilensi zonxibelelwano. Ngokwezibikezelo ezithile zesayensi, isiqingatha sabantu behlabathi ngo-2050 siza kubona, okwenza kube yiyona nto ixhaphake kakhulu kwihlabathi jikelele. Esinye sezizathu ezichaziweyo ze-myopia kukucekiswa okungafunekiyo kwe-choroid, umaleko omncinci we-0.1-0.2mm olele ngaphaya kwe-retina yakho kwaye unoxanduva lokubonelela ngeoksijini.
Yeyiphi & iiapos zonxibelelwano phakathi kwemowudi emnyama kunye ne-choroid, kwaye ukuya kuthi ga kwinqanaba elikhulu, myopia? Ukuphendula lo mbuzo kakuhle, kufuneka & nathi sithathe ukrozo ngaphakathi kwamehlo ethu.
I-anatomy yeliso lomntu Qaphela i-retina ngasemva kweliso? Kulungile. Njengoko kusenokwenzeka uyazi, i-retina sisithambisi esikhawulezileyo sesithambo ngasemva kwamehlo esithatha ulwazi olukhanyayo kwaye siliguqulele kwimiqondiso ethunyelwa kwingqondo yakho nge-optic nerve. Ukuba uyawuthanda umzekeliso wangoku, ukuba iingqondo zethu ziyikhamera, iretina sisivamvo somfanekiso kwaye siyaphakamisa.
Okwangoku, i-retina ayiloqweqwe lunye lweeseli njengoko injalo yenziwe ziiseli ezahlukeneyo zokwahlulahlula iiseli ezineenjongo zazo. Iretina inamacandelo amathandathu ahlukeneyo. Kusenokwenzeka ukuba uye weva ngeeseli zeentonga, ezisebenza kakuhle kwiimeko zokukhanya okufipheleyo, kunye neeseli zekhowuni, ezinoxanduva lombono wethu wombala.
I-anatomy yeretina yomntu
Nangona kunjalo, ukuze sifunde indlela imowudi emnyama ewagcina ngayo amehlo ethu, kufuneka sijonge nzulu kumaleko angaphandle we-retina- iiseli zemigulukudu. Iiseli ze-Ganglion zidityanisiwe ngokwamaqela aneendlela ezahlukeneyo zomzimba-ii-receptors eziphambili zibizwa ngokuba zi-ON, ngelixa umda ubizwa ngokuba lulwakhiwo lwe-OFF. Ijika ukuba i-ON kunye ne-OFF izakhiwo zisabela ngokwahlukileyo kwisicatshulwa esimhlophe kwimvelaphi emnyama kunye nesicatshulwa esimnyama ngokuchasene nemvelaphi eqaqambileyo, njengoko kugqityiwe 'kuFundo kunye neMyopia: Ingxelo yeMicimbi yoPolitiko' nguAleman, uWang noSchaeffel.
Umbhalo omnyama kwiphepha elimhlophe unemimandla emikhulu eqaqambileyo enokukhanya okuthe rhoqo. Nokuba yi-ON okanye i-OFF ayamkeli mihlaba iya kubonelela ngeziphumo kwezi ndawo. Nangona kunjalo, kwimigca emnyama yoonobumba, uninzi lweempendulo zentsimi ezamkelekileyo ziya KUCIMA, kuba iipikseli zeziko elimnyama lamabala amkelekileyo arhangqwe, ngokomndilili, iipikseli eziqaqambileyo, ezenza umahluko ombi. Ukuba imveliso yawo onke amacandelo amkelekileyo ayongezwa, isiphumo sisonke sithi “OFF dominance”. Okuchasene kuyinyani kwisicatshulwa esiqaqambileyo kwimvelaphi emnyama. Ngokubanzi, ukusondela komyinge wokuqaqamba kwiindawo ezimnyama kukuye 'kube nye', okufana kakhulu kuku-ON kunye nokukhuthazwa kwe-OFF.
Ngamafutshane, isifundo sifumanisa ukuba:
'Imodi yokuKhanya',I-polarity elungileyo (isicatshulwa esimnyama esiboniswe kwimvelaphi eqaqambileyo)CIMAiiseli ze-ganglion kwaye zivuselele i-myopia;
'Imo emnyama', ukungahambi kakuhle (isicatshulwa esikhanyayo esibonakaliswe kwimvelaphi emnyama) kugqithisaVULAiiseli ze-ganglion kwaye inqanda i-myopia.
Ke zithini iziphumo apha? Ewe, ngcono okanye kubi, ingxelo ekhankanywe apha ngasentla ifumanisa ukuba ukuvuselela ngaphezulu kweeseli ze-ganglion kukhokelela ekunciphiseni kwe-choroid ebesikhe sayichaza imihlathi emibini ngaphambili. Kwelinye icala, ukuvuselela ngaphezulu kweeseli ze-ON, ezinokuthi zenzeke ukuba ubukhulu becala usebenzisa imowudi emnyama kwisixhobo sakho, kukhokelela ekuqineni kwe-choroid. Ingxelo ibonisa ukuba iyure yokongamela iiseli ezingavumelekanga kangangeyure iyancipha i-choroid malunga ne-16 µm, ngelixa iyure enye yokufunda isicatshulwa esimhlophe kwimvelaphi emnyama yandisa i-choroid nge-10 µm. Nangona zinokubonakala zincinci kwaye zingabalulekanga, lo mahluko kubukhulu unokuchaphazela ukubona kwamehlo akho kakhulu.
Njengoko besesitshilo, ukutyeba kwe-choroid kucetyisiwe njengenye yeempawu zokuqala zophuhliso lwe-myopia-ii-choroids ezincinci zikholelwa ukuba zivuselela i-myopia, ngelixa i-choroid eshinyeneyo ithintela ukukhula kwe-myopia. Ngamanye amagama, indlela emnyama kwifowuni yakho ngekhe ikuthintele ekuboneni kude, kodwa iya kuthi chu isuse isiphumo esingathandekiyo emehlweni akho. Kwelinye icala, iimeko zesiko apho kuboniswe isicatshulwa esimnyama kwimvelaphi eqaqambileyo kunokukwenzakalisa kunokuba kulunge.
Imowudi emnyama kwiifowuni zethu
Sele sisekele umbono wokuba uninzi lwee-smartphones zangoku sele zinendlela emnyama okanye ziya kufumana inqaku elinye ngasekupheleni konyaka. Kunzima ukubonisa ukuba ngubani uvulindlela kule ntsimi, kodwa sinokuqhagamshela ukufika konxibelelwano olumnyama ekunyukeni kwemiboniso ye-OLED. Nje ukuba kunqabile, ezi zinto ziboniswa ngokuthe ngcembe kodwa ngokuthe ngcembe zihlala kwindawo ephezulu kwaye ngoku zinokufumaneka nakweyiphi na kwi-9 ye-10 yeeflegi. Ii-OLED zigcina kuluhlu oluphakathi, nazo, kwaye ngekhe zithathe ixesha elide ngaphambi kokuba i-LCD ibe sisiqendu esigqibeleleyo kwimbali ye-smartphone.
Esinye sezizathu esoloko zikhankanywa ukuba kutheni imowudi emnyama ibonakala iyinto enqwenelekayo ngabasebenzisi befowuni yenye engenanto kwaphela kunxibelelwano ekufundeni, kuyilo, nakwimizobo yangaphambili yomqolomba - zii & apos; ukonga ibhetri. Ewe amandla okusindisa ibhetri kwimiboniso ye-OLED ayinakuhoywa- njengoko uyazi, xa ii-OLED zibonisa mnyama, iipikseli ezichaphazelekayo ziyavalwa, ezigcina ibhetri. Oku kwahluke mpela kwimiboniso yeLCD, ehlala ivuliwe, nokuba yeyiphi na imifanekiso ebonisiweyo kwaye iya kutsala amandla alinganayo xa ujonga iphepha elimhlophe lewebhu okanye into emnyama.
Imo 13 emnyama Imowudi yasebusuku yeSamsung kunye neapos; OneUI I-Android 10 Q & apos; umxholo omnyama I-Xiaomi & apos; s MIUI 10 imowudi emnyama IHuawei & apos; s EMUI 10 imowudi emnyama Imowudi emnyama ye-OnePlus 'OxygenOS
Ukufaka imo yenkqubo ebanzi ebumnyameni kwifowuni yakho ye-OLED kunye nokupeyinta zonke ii -apps zakho eziqhelekileyo ezisetyenziswayo kumnyama akunakulindeleka ukuba ziphindaphinde okanye ziphindaphindwe kathathu kubomi bebhetri yakho imihla ngemihla, kodwa iya kukunika iyure eyongezelelweyo okanye njalo yobomi bebhetri, enokubaluleka kwiimeko ezithile.
Isiphelo: Ngaba kuya kufuneka usebenzise imowudi emnyama okanye hayi?
Ewe kunjalo, kodwa kuya kufuneka usebenzise imowudi elula.
Nokuba bubuphi na ubungqina, izifundo, kunye nophando ezikhoyo, ukusebenzisa imowudi emnyama kwimowudi yokukhanya kukuzikhethela komntu ngamnye. Nokuba ithini na inzululwazi, ukuba uthanda imowudi emnyama ngakumbi, awusayi kusebenzisa indlela emnyama. Ukuba ungumntu olula kwimowudi, ngokuqinisekileyo, qhubeka-ukhetho lolwakho. Ukhetho lomntu siqu lawula inkosi apha kwakhona.
Ngokwam, ndonwabela uninzi lweendawo zam zonxibelelwano ezinxibe mnyama. Xa ndibukele iividiyo okanye ndibukele imifanekiso, imowudi emnyama isebenza ngokungagqibekanga, kwaye andisayi kuphuma ndiye endlinnini ukuze ndenze ngokwezifiso iapp nganye okanye iwebhusayithi endiyisebenzisa mihla le ukuba nemowudi emnyama, ngenkqubo yomntu wesithathu, useto olulula lokutshintsha, okanye ulwandiso. Kukwanjalo ukwenza umsebenzi weaudio-wokubonwayo mihla le- zombini iAdobe Photoshop kunye neNkulumbuso ziza kwimowudi emnyama ngokungagqibekanga, njengoko isenza umxholo weaudio-wokubonwayo uvele ngendlela engaphazamisiyo.
Imowudi emnyama kukuthunyelwa nguthixo kwindawo ezikhanyayo
Ngayo yonke loo nto ithethwayo, ndiziva ngathi uninzi lwabantu lusebenzisa indlela emnyama engalunganga. Ndiyavuma ndiyenzile loo nto, nayo-nje ukuba imowudi emnyama yongezwe kwi-app okanye kwinkonzo endiyisebenzisileyo, ndayenza ngoko nangoko kwaye andizange ndiyicime. Emva kwexesha ndiye ndaqonda ukuba imowudi emnyama kufuneka yenziwe ebusuku kuphela, ukuba kunokwenzeka usebenzise ifowuni yakho ukulwa nokuphuthelwa, okanye kwiiapps ezithile ezinomxholo-onzima kwaye ungazibandakanyi kufundwa okuninzi. Umzekelo, ukubukela iNetflix, ividiyo yeYouTube, okanye ukukhangela kwigalari yakho - ngamafutshane, naphina apho ungabinaso isicatshulwa kwaye ufuna ukuba umxholo uvele ngokwenyani.
Nangona kunjalo, kule mihla ndi-wizard phezulu, ndixhomekeke kwimowudi yokukhanya ye-ol 'emini kwaye xa kufikwa kufundo / ukubhala uninzi lwetekisi kuphela ngenxa yezizathu zokuba semthethweni. Ndikwenza njani oko? Rhoqo ngesandla, kodwa xa kunokwenzeka, ndicwangcisa imowudi emnyama ukuvula ixesha elithile okanye ukwenza ngokuzenzekelayo nokuzikhubaza ekuphumeni kwelanga nasekutshoneni kwalo. Kukho ulingo olulula onokuzama ukufumanisa ukuba ufuna imowudi emnyama okanye hayi ngoku - yiya ngaphandle, phantsi kwelanga eliqaqambileyo, kwaye usebenzise ifowuni yakho ngendlela obuya kwenza ngayo. Nokuba kukukhanya okuphezulu, imo emnyama iya kuba nzima ukuyenza kunokukhanya. Kwelinye icala, kuya kufuneka ujike imowudi emnyama xa ukukhanya okukufutshane kuhla ukuze kupheliswe ukukhanya okungakhanyisiyo ebusuku. Ewe kunjalo, ukuthoba ukukhanya okanye ukwenza icebo lokucoca ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka kule meko kunokunceda kakhulu.
Ekupheleni kosuku, ngaba imo emnyama yimfashini okanye isisombululo esibonakalayo esibonakalayo sabaninzi? Ndivakalelwa kukuba iapos encinci yekholamu A kunye nekholamu encinci B: imowudi emnyama iyinto eqhelekileyo, kodwa inefuthe lokusetyenziswa kobomi bokwenyani eliyenza ukuba ibe yinto ebalulekileyo kukhetho lwangoku lokudibanisa umsebenzisi njenge-Android iOS.
Kwenye, ndiyayixabisa into yokuba sinikwe ukhetho lokukhetha phakathi kwendlela emnyama kunye nokukhanya ngokuxhomekeke kwiimfuno zethu ezithile.
Yonke into ngokumodareyitha, kubandakanya ukumodareyitha.
Izikhokelo kunye neencwadi:
1. UAndrea C. Aleman, uMin Wang kunye noFrank Schaeffel (2018). Ukufunda kunye neMyopia: Umahluko weMicimbi yePolarity . IiNgxelo zezeNzululwazi vol. 8, Inombolo yeNqaku: 10840 (2018)
Mbini. A. Buchner, N. Baumgartner (2007).Ubume bemeko yokubhaliweyo obubhaliweyo buchaphazela ukusebenza kwayo ngaphandle kokukhanya okukuyo nokungafani kombala. I-Ergonomics Vol. 50, No. 7, Julayi 2007, 1036-10633. UPiepenbrock, uMeya S, uBuchner A (2013). Ukubonisa ukubonakala kakuhle kuluncedo ngakumbi kubungakanani beempawu ezincinci: iimpembelelo kuyilo lokubonisa. Izinto zoLuntu: Ijenali yeZinto zoLuntu kunye noMbutho we-Ergonomics, ngoDisemba 20134. UBauer, D., uBonacker, M., kunye noCavonius, C. R. (1988).Ukufunda kwiphepha ngokuchasene nokufunda kwizikrini.
5. IHolo, R., Hanna, P.Iziphumo zePhepha leWebhu leNqaku-uMdibaniso woMdibaniso weMibala ekuFundeni, ukuGcina, iiAesthetics, kunye nokuziphatha ngokuzimisela. Ukuziphatha kunye neJenali yeTekhnoloji yoLwazi.
I-iphone 7 kunye nomhla wokukhutshwa kweverizon
Isigidi esinye sabathengi beSprint bakwimeko enkulu yokumangaliswa kweT-Mobile kwiveki ezayo
Ootata kunye neziphathamandla zoSuku olugqwesileyo ngosuku (2021)
Nantsi into ixabisa i-Samsung Galaxy S III
Ungayiguqula njani ifowuni yakho yakudala ye-Android ibe sisithethi esixhasayo esinamandla sikaGoogle
Konke okufuneka ukwazi malunga nokutshaja ngaphandle kwamacingo kwi-iPhone 8, 8 Plus, kunye ne-iPhone X
Ulwaphulo-mthetho lwamva nje olunamanani efowuni eT-Mobile abangela amasela ukufikelela kwiakhawunti zebhanki
Eyona misebenzi mihle yekhamera yeAmazon yoSuku lwe2021